Saka kana isu titange kutaura nezvaJesu uye kana isu kutaura nezvaMwari vanhu dzimwe nguva vanofunga zvakafanana Categories. Vanofunga zvakasikwa sezvo hondo yepasi pose pakati paMwari uye Dhiyabhorosi. Uye sezvinoita zvose kwedu kufarira nyaya, tiri vaitarisira mugumo kuona uyo anokunda. Jesu chete mumiririri zvakanaka kuti tinovimba Unobata? Jesu chete mumwe hunhu munyaya?
Zvakanaka muEvhangeri Mark Tichawanepi mijenya mikana kuona Jesu pamwe nemasimba zvakaipa zviso zvakatarisana. Saka tichange kutarisa nyaya uye edza kupindura mubvunzo uyu. Uye ndinoda nharo kuti pane hondo mberi pakati paJesu uye masimba zvakaipa, asi hazvisi kurwa kwakanaka. Ngatitaurei kuzviudza Mark 5.
Around nguva iyi Evhangeri yaMako, Jesu akanga achidzidzisa uye mapoka makuru evanhu akatanga kuungana uye kuteerera zvaaidzidzisa. Zvino madekwana chavainacho ari mugwa uye nechikepe. Ndiyo nyaya apo dutu rinouya, vadzidzi vhunduka, uye Jesu anonyaradza mhepo namashoko ake, "Rugare, gadzikana. "Saka vakanga vasangana nokushorwa zvakanyanya mumakungwa uye Jesu akatora nokuuchengeta. Panongotanga vanotanga kuzorora vava akasangana zvikuru nokushorwa.
Ngativerengei chinyorwa, kutanga pandima 1.
Vakasvika mhiri kwegungwa, kusvikira panyika yevaGadharini. Zvino Jesu wakati vakabuda muchikepe, pakarepo munhu akamuchingamidza achibva kumarinda ane mweya wetsvina. Akararama kumakuva. Uye hapana aigona kumusunga zvakare, kunyange necheni, nokuti akanga kazhinji kusungwa nengetani uye ngetani, asi iye yaichiviwa ngetani voga, asi akadambura zvisungo zvidimbu. Hapana… aiva nesimba… rokumukunda. Usiku nemasikati pakati pamakuva uye pamakomo aigara achidanidzira uye achizvicheka nemabwe. Zvino wakati achiona Jesu ari kure…, Iye akamhanya vakawira pasi pamberi pake. Uye vachishevedzera nenzwi guru, akati, "Chiiko iwe kuita neni, Jesu, Mwanakomana waMwari Wokumusorosoro? Ndinokupikirai naMwari, regai kundirwadzisa. "Nokuti Jesu akanga ati kwaari, "Buda mumunhu, iwe mweya wetsvina!"Zvino Jesu akamubvunza, "Zita rako ndiani?"Iye akapindura, "Zita rangu ndiRegioni, nokuti tiri vazhinji. "Uye iye Akamukumbirisa zvikuru kuti arege kuidzinga kubva munyika iyo. Zvino boka guru renguruve rakanga richidya ipapo mugomo, akamukumbirisa, vachiti, "Isu Tumira penguruve; ngatipindei navo. "Saka akavapa mvumo. Mweya yetsvina ikabuda, uye akapinda munguruve, uye boka, rinosvika zvuru zviviri, rakamhanya richiburukira kumawere rikapinda mugungwa uye rikanyuramo mugungwa. Nevafudzi vakatiza vakandozivisa izvi muguta neparuwa. Uye vanhu vakauya kuzoona kuti chii chakanga kuti zvaitika. Vakasvika kuna Jesu, vakaona nedhimoni, uya akanga waiva neRegiyoni, akagara ikoko, akapfeka uye ari munhu kwaye…, uye vakatya. Vaya vakanga vazviona akatsanangura kwavari zvakanga zvaitika dhimoni murume uye nguruve. Vakatanga kumukumbirisa Jesu kuti abve mudunhu mavo. Sezvo akanga mugwa, murume akanga akabatwa namadhimoni akakumbira zvikuru kwaari kuti ave naye. Uye haana kumubvumira, asi akati kwaari, "Enda kumba neshamwari dzako undovaudza kuti zvikuru naShe zvawaitirwa, uye sei iye tsitsi nemi. "Naizvozvo akaenda uye akatanga kuparidza muDhekaporisi sei zvikuru Jesu zvaakamuitira, vose vakashamisika. (maka 5:1-20 BSN)
ini. Jesu anosangana ari nedhimoni Man (5:1-6)
Saka pavakangopedza vobuda muchikepe yavari vakasangana nomurume uyu ane mweya wetsvina. mweya wetsvina iri rinonyanya chete neimwe nzira achiti dhimoni. Murume uyu akasangana navo akanga nedhimoni. Rondedzero mashoko anopa kwaari ndiko anotyisa.
Akararama pevakafa. Iye chinzvimbo boka vakafa, kuti boka wevapenyu. Akanga simba rinopfuura revanhu, zvokuti hapana maketani aigona chokumurambidza. Iye chete akamedura. Aigara nokupopota vachishevedzera. Akanga panyama kukuvadza pachake, kurova pachake, achizvicheka. Uyu munhu anetseka.
Zviri vorudzii zvakaoma kwatiri kufungidzira nemadhimoni yokutambudzwa mhando rino muzuva redu. Poshi, nekuti vazhinji vedu vakarega kudavira muna inoshamisa. uye chechipiri, nekuti vazhinji vedu hatina kumboona nemadhimoni kutambudzwa munhu. Asi ndinoda kuti kushandisa fungidziro yako neni kweminiti.
Chii chatinofanira kuita kana taona munhu uyu? Uri uchityaira pamba rimwe zuva uye ona hama kurarama kumakuva, mhere marwadzo uye kurwadziwa. Ndinoziva ini. Ndingada kuva kudana simba vamwe mutsa kubvuta angamusimudza. Taizofanira institutionalize iye. Iye ngozi pachake uye kune vamwe uye kwete kwaye. Iye anoda kubatsirwa. Tsime vanhu panyika yevaGadharini vasingazivi zvokuita naye. Vakaedza chains angamusimudza, asi hazvina kushanda. Ndine chokwadi vakanga kutya kwedu mupfungwa dzavo.
Kune vanhu vakaita izvi muzuva redu, vari chaizvoizvo ndondo akafanana naye. With manzwi misoro yavo, uye chisimba pfungwa, uyo cheka. Isu patsanura sechinhu zvawo kupenga kana kuora mwoyo, asi ndine chokwadi muna zhinji izvi kacho, kwete zvose, asi vazhinji kacho izvi zviri nemadhimoni nokumanikidza. Uye zvakafanana maguta vanhu munyaya, hatizivi zvokuita navo asiri kuedza akavakunda, muvachengete vazvikuvadza nevamwe. Tinotofanira zvakawanda yepamusoro nzira kuita kuti zvino. Tine masangano uye psych mawadhi vane makamuri vane padded masvingo uye mishonga.
Chikonzero craziness kwake kunopfuura chete vamwe kunotevera kuti dzakachinjwa mamiriro ake nepfungwa. Zvakaipa midzimu zvatakawana pamusoro muviri wake uye vari hwega naye! Haadi kurarama seizvi. Ari vaidzvinyirirwa. Iye akabatwa, kuitwa musungwa, vakatambudzwa pamusoro zvaanoda.
Madhimoni Rwisanai Mwari uye zvinangwa zvake
Musanyengerwa, hama nehanzvadzi. Madhimoni chaiwo. Havachina Zvisikwadzimu. Havachina zvakaipa uye vanoshandira pamusoro zvinangwa zvaMwari. MuEvhangeri Mark, Jesu ane zvakawanda run-vazukuru nemadhimoni. Ane akafanana chaizvo chiitiko muchitsauko 1. Vakawanda nguva muEvhangeri madhimoni vari kudzvinyirira vanhu uye kuedza kuparadza zvakasikwa naMwari. With murume uyu, vari dehumanizing naye. Vari kuedza kuparadza mufananidzo waMwari maari. Madhimoni vanotsvaka kubvisa uye kuvhiringidza zvinangwa zvaMwari munyika. And Mwari ane, vari uchangamire hwake, akabvumira mauto zvakaipa izvi kuti kubasa.
Madhimoni 'basa haasi chete Dzakafanana wenhaka uye kurwadziswa rwakadai kunyange. Sezvo Chokwadi, vatendi indwelled neMweya waMwari haagoni kuva dzenyu. Achiri vari pabasa kuzorwa nesu. Ivo kutiedza kuti tiite chivi. Vakaparadzira dzidziso yenhema. mu 1 Timothy 4, Pauro anodana dzidziso yenhema dzidziso dzemadhimoni.
Madhimoni anokonzera zvakawanda zvakaipa munyika. Zvechokwadi tichiri mutoro apo tikateerera kwavo simba. Uye ndivo vavengi vaMwari mupenyu.
The Man Rinomhanyira Jesu (5:6)
Back kumunhu. Naizvozvo mauto nemadhimoni vakakukurira kuti tirwise. Hapana munhu akagona kurwira iye. Ari ari kumakuva kure vanhu sezvinobvira. Asi kana achiona Jesu kachinambwe anomanyira naye uye anowira pasi pamberi pake.
Ndima iyi anowana zvishoma runonyengera pano nokuti madhimoni kutaura neuyu, asi ndinofunga rugwaro zvinoita kuti titende kuti murume akanga ari kudzora apo akamhanyira kuna Jesu. Anoona Jesu, uye anoziva kuti pamwe Jesu anogona kuita chimwe chinhu pamusoro madhimoni aya vanotambudza naye. Pamwe Jesu anogona amusunungure pakumanikidza. Anoona mukana zororo uye Anomhanyira mukana.
Tinogona kudzidza chinhu kubva namadhimoni murume pano. Haana kuziva sei munhu aigona kurwira iye, asi sezvineiwo aiziva ani aigona kurwira iye. Vamwe vedu vanofanira kuuya irori kutosvika mukuputsika, apo zvose tinogona kuita dzinovangira Jesu. Tinofanira kurega kutsvaka kuda kwedu simba, kuti mari yedu, neshamwari dzedu uye tinofanira kumhanya Jesu! Jesu kunoda, "Uyai kwandiri imi mose muri vakaneta uye rinorema makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo remweya yenyu. " Hatizivi kuti tinenge kununurwa, asi tinoziva vanozvigona.
Zvakafanana kana pakugadzirisa vabereki vari mupfungwa kusagadzikana. Regai kushora navo, evanoivenga, vanoseka ivo muchavaseka. Tinofanira kuva tsitsi. Kupfuura chimwe chinhu chipi nechipi, vanofanira kupona. Tinofanira kuvashumira holistically, kushandisa mushonga kana zvichidiwa, asi kunongedzera kuti Jesu kununurwa. Uye kuvanyengeterera kundomuchingamidza. Vanofanira kunosangana naShe. Mishonga chingatibatsira nekuitonga, uye mazano zvinogona kutibatsira kufunga zvakajeka, asi Jesu chete anogona kutiita wose.
Regai kuswedera mufunge chimwe chiitiko.
II. Madhimoni Taura (5:7-13)
Panongotanga munhu anowira asati Jesu anoshevedzera, "Chiiko iwe kuita neni Jesu, Mwanakomana waMwari Wokumusorosoro? Ndinokupikirai naMwari, regai kundirwadzisa!" Rugwaro rwacho anoti anodanidzira kuti panze nokuti Jesu akanga achiti, "Buda maari iwe mweya wetsvina." Izvi zvinoratidza kuti kuti uyu ndiwo mweya wetsvina mukati naye achitaura.
Zvino tava vatotanga kuti Jesu uye madhimoni havasi kudivi rimwe. Jesu ndiye Mwanakomana waMwari, uye madhimoni pamusoro zvinangwa zvaMwari. Saka ngatiedzei kuisa izvi nemaonero.
Izvi tingazvifananidza munguva yehondo. Uye regai kuti kutaura imwe nyika ine vamwe POWs uye US mauto akauya kuzoponesa navo uye varindi mujeri vanoti, "Ah US Army? Man zvauri kuita pano? Unogona chete ngatiitei chinhu yedu Ndapota? Regai akatirwadzisa!"Ko achipenga? Zvakafanana, "Iyi haisi hondo? Ko iwe vairwa pachinzvimbo achipemha?"Asi ichi rinoratidza kuti ino haisi hwandaiva hondo. Pane chimwe chinhu chakasiyana pamusoro hondo iyi.
Saka tiri kuenda kutarisa zvinhu zvina tinosangana ichi naJesu nezvokuvapo nemadhimoni uye ukama hwavo kuna Jesu.
1. Vanoziva ndiani Ndiye
Madhimoni havafaniri kubvunza ndiani uyu amire pamberi pavo. Panongotanga kuMuona ivo kumuziva kuti Jesu. Vanoti Ndiye Jesu, Mwanakomana waMwari Wokumusorosoro. Havaiti chete kumudana nezita asi vanoziva chinzvimbo chake.
Izvi chaizvoizvo zvinoita zvizhinji Kufanana naPetro kureurura muna Mateo 16 kuti Jesu ndiye "Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu. " Madhimoni chaizvoizvo chete akaparidza chokwadi chaMwari. Uye vane zvakawanda zvikuru tinzwisise zvinhu husingaperi kupfuura vomuguta vose vanhu kumativi. vanoziva. asi, ivo mupanduki.
Izvo Ndinofunga anotiratidza chokwadi zvinotyisa. Hama nehanzvadzi, unogona kuziva Jesu ndiani, pasina kuziva Jesu. Unogona kuuya Summit Church kupera kwevhiki ose. Unogona kuva chebhaibheri. Unogona kuteerera ose Podcast uye verenga ose bhuku zvechitendero. Asi usafungidzira nokuti unogona kutaura Jesu ndiani, kuti imi munomuziva.
Kuziva naYe ane chokuita zvakadzama, Ukama - kuwadzana uye rudo uye tichivimba pane yakadzika pamwero. Kuziva nezvake chinhu kupfuura nomusoro chokwadi. Nomusoro chokwadi haina chii Mwari akatidana kuti kuita. Uye Mwari haana vakashamiswa bhuku rako smarts. Unogona kutaura zvinhu zvechokwadi? Zvakanaka iwe; saka anogona madhimoni.
James 2:19 anoti, "Munotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete; munoita zvakanaka. Kunyange madhimoni anotenda-achidedera!" Kana zivo yako pamusoro paMwari haana zvakatungamirira achinja upenyu, hamusi nani kupfuura madhimoni. Kutenda kwechokwadi rinoratidza.
2. Vanoziva Achaita aivarwisa
Anoti, chii chamakawana kuita neni? nyonyova, sei uripano? Tisiye takadaro! Vanoziva kuti Jesu, Mwanakomana waMwari Wokumusorosoro auya kuunza Umambo hwaMwari. Vanoziva kuti Jesu auya kuti achabvisa zvakaipa zvose uye kuti zvinhu zvose zvive zvitsva. Vanoziva kuti zvinosanganisira kuparadzwa kwavo. Vanoziva kuti pakupedzisira vachaparadzwa uye Jesu Kristu achatonga.
3. Vanoziva Iye ane simba kupfuura pavo
Vanoti kuti zita ravo rinonzi Regiyoni. Izvi zvaireva kuti kuratidza kuti pane vazhinji vavo. Masoja MuRoma ane Legion rakanga zvishanu zviuru zvitanhatu. wo, tinoona sei simba vari. Tiri kutaura kanenge 5,000 madhimoni. asi, ivo andinzwire tsitsi.
Hapana chikonzero chokutya kana muri simba kupfuura muvengi wako kana kunyange une mukana.
Wakamboona dudes vanotaura hombe mutambo uye kufamba-famba madenderedzwa asi imi aisazovaona kurwisana? Vanhu kazhinji kuziva kana havana zvachose pasina mukana kuhwina. Izvi ndizvo zvatiri kuona pano. Chii tinoona chinhu simba, akakunda muvengi achipemha tsitsi.
4. Vanoziva kuti ndiye simba ravo
Vanoziva kuti vanofanira kukumbira mvumo yake. Haufaniri kukumbira mvumo kubva zvenyu wakaenzana. All muMagwaro masimba zvakaipa vanoda mvumo naMwari chinhu. Funga pamusoro nyaya yaJobho. Satani anoda mvumo raMwari rokubaya Jobho uye ari chete vanobvumirwa kuita zvakawanda sezvo Mwari kuchaita.
Havagoni kwaamboenda kana kuita chimwe chinhu pasina mvumo kwaJesu. Ungafungidzira nyika yedu kudai Mwari haana kuvadzivisa? Kudai vakanga izvozvo nzira yavo aizotambudza tose sezvavakaita murume uyu. Asi Mwari haabvumiri kuti uye tinofanira kumurumbidza nokuda.
Nekuti maari zvinhu zvose zvakasikwa, kudenga nepanyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, zvigaro zvoushe kana masimba kana vatongi kana vane simba -zvose zvinhu zvakasikwa pachishandiswa iye uye nokuda kwake. (VaKorose 1:16 BSN)
madhimoni aya zvakaitwa kuburikidza uye Jesu. Ivo vapanduki, asi zvichiri kushandiswa sezvo pawns muurongwa hwake huri chikuru kuratidza paChake kure.
Simba Shoko raKristu chaizvo vanoonekwa pano. Sezvakangoita nezvaakaona pamberi ne "Rugare, gadzikana. "Tinoona simba kweShoko raMwari. Jesu ndiye Mwari uye kana iye anotaura Nokuiraira zvinofanira kuitwa. Haakumbiri, anoraira. Shoko raJesu ane simba kupfuura mupfungwa atirari. Shoko Kristu simba! Chine zvose pamwe chete!
Munyaya ino pamberi Akaratidza hachitongi rake pamusoro pezvisikwa. Nyaya pashure ichi anoratidza hachitongi kwake urwere. Jesu ndiye Ishe wavose. Uye yengoni anomununura.
Hama nehanzvadzi, tine kutenda zvakasimba kuti Jesu zvechokwadi ndiye Ishe wamadzishe. Bhaibheri rinodzidzisa kuti hapana zvachose hapana chiripo kuti haisi pasi pesimba raJesu Kristu. Hapana muti, hapana ruzha, hapana Tupukanana, hapana mhuka, hapana munhu asingatenderi, hapana Muslim, kwete Hindu, hapana ngirozi, hapana dhimoni, hapana dhiyabhorosi kuti haisi muduku uye pasi pesimba raJesu Kristu. Mwari angabvumira kumukira kwechinguva, uye Angabvumira kuti vaende mberi kure noushe hwake kwechinguva, asi Jesu achaita zvinhu zvose zvitsva uye iye achaita zvinhu zvose pasi petsoka dzake.
III. Jesu Anonunura Man (5:14-20)
By neshoko rake rine simba Jesu wakaisa murume. Akakandira madhimoni.
Apo vanhu kumuona akanga agere imomo akapfeka uye ari munhu kwaye. Munguva zvose achinja. Kokupedzisira vakamuona akanga haumbobudi pachake uye nguva nokupopota. Zvino akanga sechinhu chakajairika sezvo ini newe.
By tsitsi dzake Jesu akadzorera murume uyu. Jesu auya munyika kudzorera zvisikwa zvake kuti saka hwakakanganiswa chivi uye norufu. Ari achiyananisa zvose kuna Baba.
Uye anoratidza ngoni murume uyu uye anomurwira. uyu murume, kunyange Akamanikidzwa, waiva mutadzi akaita seni newe. Haana kodzero ucharwirwa.
Asi Jesu Haanunuri inobva chii wakakodzera. Haadi kumirira kuti uwane pamberi Iye anoita tsitsi. Jesu ane tsitsi nokuti Jesu ndiye ngoni. Ari rudo uye ane hanya zvisikwa Rake.
Hapana womudzimu saka simba, hapana chivi saka simba, hapana chinodarika simba uye simba raJesu. Nokuti zvose zvakasikwa zviri pasi pake. Zvino kana Iye unonunura, Anozviita kubva tsitsi dzake pachake, mutsa, uye nyasha.
Jesu anogona kutinunura kubva zvachose chinhu: pasina, kujairira, kusuruvara, marwadzo, kushungurudzwa, muchato zvakaipa, chero ingava. Jesu ndiye murapi wako ndewangu. Ingaratidzika tariro, asi tinoona kununura simba raKristu pano.
IV. The People Pindura (5:17-20)
Kwete chete nemadhimoni akanga kunosangana naJesu, asi guta rose rine. Vazhinji vavo kupupura chiitiko chose, uye vamwe vakanzwa nezvazvo. Sei munhu wose sei kuonana kwavo naJesu?
Vanhu vomuguta vakatya! Vakanga kumboona simba uye simba zvakadaro. Pamwe vanenge vakatsamwa kuti nguruve dzavo akamhanya kuruware. Havana kuziva sei naye! Chaizvoizvo kwaari achipemha kusiya!
Vanhu vakawanda nhasi havana kufanana naJesu. Iye unonetsa yavo muenzaniso zvakajairika muupenyu. Jesu kunoita kuti vanhu dzamira. Little comfy Jesu mubhokisi hakuwaniki. Kana uri kutsvaka naYe, uchaita kuramba tichitsvaka upenyu hwako hwose. Iye anozunungusa zvinhu. Iye anoparadza rima uye anodana kutiisa chiedza.
Aimbova nemadhimoni anonzwira aitenda. Anoda kutevera Jesu okumbira kuti vave naye. Jesu anomuudza kuti agare uye kuudza vamwe. He anomutsvaka. Izvi ndizvo zvakanaka mhinduro kunosangana naJesu.
Ndirini nguva imi akaudza vamwe zvawaitirwa naShe nokuti imi? ZvaAri ndikakurwirai kubva? Hazvirevi kuva kunoshamisa kufanana nemadhimoni nhaka, asi zvakanaka. Aigona kuva kununurwa imwe chivi hondo. Chingava kukurira muedzo. Raigona achiporesa zvirwere. Kana kungoudza vamwe sei Ari wakakuponesa. Taurira vamwe!
Tinoona pano kuti tikwanise kupupurira simba, nyasha, uye simba raJesu uye kuti achiri asina kuva mudzidzi. Vamwe vanobvuma nenyonganyonga, vamwe ruvengo, vamwe chete zvadzo makuwende. Hapana ava kufarira Mwari kunoda.
Iye zvombo vatongi uye masimba uzviise pachena, kuburikidza akavabudisa pachena, akavakunda maari. (VaKorose 2:13-15 BSN)
Kunyange zvazvo Jesu akakunda hondo dzakawanda muvengi munguva Yake panyika, Kukundwa zvakaipa zvinoitika panoperera Evhangeri yaMako. Iye Clenching hondo panguva muchinjikwa. Zvaiita sokuti akanga akundwa kwekanguva. Asi aizomuka nesimba rose.
Panguva pamuchinjikwa Jesu akaisa mauto aya emadhimoni, kana vatongi uye masimba sezvo Pauro anodana navo VaKorose, pachena. He nekunyadzisa navo. Akaratidza munhu wose kuti vakaneta. Iye kudzimwa simba ravo. Akagovera chokupedzisira furidza- kufanoita.
Zvino zvose yokupanduka kwavo hakubatsiri. Anenge akafanana Republican dzeparamende. Pakanga pasina nzira vamwe vakomana aizokunda, asi vakaramba kuda pamwe kuzvinyengera. madhimoni aya ramba kupandukira Mwari, kunyange vangobvumira zvakajeka nechekare vakundwa. Akatanga basa akavimbiswa kare. Uye kana achidzoka Achaita pakupedzisira vavengi vake.
Nokungotsigira kuita basa rake pamuchinjikwa pamwe kutendeuka nokutenda Tinowanei kubatsirwa simba, simba, uye kupembera kwaJesu. Ndiye Ishe wavose. Kuongorora mwoyo yenyu uye uone paunopiwa Ishe ichi.
Ndiyo mhando waIshe kuti ndinoda kutevera. Mumwe ari kurwira, Mambo, Ishe, Mutongi, uye Muponesi ane ngoni. The Good News chinodawo mhinduro.
vhiki rino, zvakaipa zvinoitika kuva nechemberi dzedu. A chakashata chiito zvakaipa kwakaitika Colorado. Tinofanira kushungurudza. Tinofanira achatsamwireiko. Asi hatifaniri kushamiswa kana kwete Mwari uchasimudzirwa pakupedzisira. Kwokupedzisira furidza rakundwa.
Jesu nesimba pamusoro zvakaipa panguva muchinjikwa. Anovangiramo. Fall pamberi pake. kuvimba naye. kuMutevera. Murumbidzei. Udza Vamwe.
KG • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 5:01 ndiri • pindura
Ndinokutendai nokuti chii here rwendo!!! ini “rudo” kuti itsva Vanovhaira Logo. Ungakwanisa akauisa pane dzimwe nguvo kana zvinhu. Vachida kuwana T-Shirt pamwe kuti. :)
Taurai: Article My Read (8-19-2013) | My Daily pezvishamiso